पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन् : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली « प्रशासन
प्रकाशित मिति : 26 December, 2020 4:05 pm
काठमाडौँ । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि २०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरियो।
चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निजी आवास पुनःनिर्माण सक्नेगरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। नसक्नेलाई अब के हुन्छ ?
ग्रामीण भेगमा भूकम्पले भत्किएका विद्यालयका आकर्षक भवन पुनःनिर्माण भएका छन्, तर शौचालय भने छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। के शौचालय नबनाउने नै नीति प्राधिकरणले बनाएको हो ?
स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणमा जग्गाको समस्या देखिएको छरु यसलाई प्राधिकरणले कसरी समाधान गर्छ ?
गैरसरकारी संस्थाले गरेका पुनःनिर्माणका कामको अनुगमन प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायले नगर्दा अपारदर्शी रुपमा खर्च एवम् काम भएको गुनासो आएको छ नि ?
गत वर्षदेखि विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालमा बढेको छ। कोरोनाका कारण भूकम्पपछिको पुनःनिमणि कति ढिला हुन्छर ?
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका अनुभव एवम् सिकाइ कसरी अभिलेखीकरण गरिन्छ ?
बेला-बेलामा हुने नेतृत्व परिवर्तनबीच यहाँले लामो समय प्राधिकरण हाँक्नुभयो ? त्यसबीचमा कस्ता-कस्ता अनुभव प्राप्त भए ?
Tags : पुनःनिर्माण प्राधिकरण भूकम्प सुशील ज्ञवाली